ဘက်ထရီစမ်းသပ်ချက်မှာ ဗိုလ်စွဲသွားတဲ့ OnePlus 5T – DigitalTimes.com.mm
ဘက်ထရီစမ်းသပ်ချက်မှာ ဗိုလ်စွဲသွားတဲ့ OnePlus 5T
OnePlus 5T ဆိုတာကတော့ $500 လောက်နဲ့ဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပါ။ အရမ်းအရမ်းကိုဈေးကြီးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုသုံးနေရသလို ခံစားမိအောင် သပ်ရပ်ကျစ်လျစ်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ အရမ်းကိုမြန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို ဘက်ထရီကရောဘယ်လိုလဲ????
OnePlus 5T ကို နှစ်ပတ်လောက်သုံးပြီးဘက်ထရီစမ်းသပ်မှုကိုလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ တွေ့ရတာလေးတွေကို ပြန်ပြောပြပါမယ်။ OnePlus 5T ရဲ့ ဘက်ထရီက 3,300mAh ဖြစ်လို့ OnePlus5နဲ့တူတူပါပဲ။ display ပိုကြီးသွားတာအပြင် OnePlus 5T က OnePlus5လိုမျိုးအကြာကြီးခံတာကြောင့် ပျမ်းမျှထက်ကိုပိုတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်တဲ့အခါ တစ်ခါအားသွင်းပြီးရင် တရက်နဲ့ နေ့တစ်ဝက်ထိ ကြာကြာသုံးလို့ရတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဘက်ထရီစမ်းသပ်ချက်မှာတော့ OnePlus 5T က ၈နာရီ ၅၁ မိနစ် ဖြစ်ပြီး OLED screen ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Galaxy Note 8, Google Pixel2XL တို့နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် သူတို့ထက်တောင် သာနေပါတယ်။ ရမှတ်ကတော့ OnePlus5ထက် ၅% နည်းနေပါတယ်။
OnePlus 5T မှာ ကြိုက်တဲ့တစ်ချက်က Dash Charge ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာပါ။ သူ့ရဲ့ Dash Charge ကတော့ တခြားအားသွင်းအမြန်စနစ်တွေမှာနဲ့ မတူပါဘူး။ တခြားသော အားသွင်းအမြန်ကြိုးတွေက ဗို့အားကိုမြှင့်ထားတာဖြစ်ပြီး သူကတော့ အမ်ပီယာ (A) ပမာဏကိုမြှင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Dash Charge အားသွင်းကြိုး၊တုံး လေးက5Volts နဲ့4amps(A) ဖြစ်ပါတယ်။ သူများနဲ့မတူတာကတော့ ဖုန်းကိုသုံးနေရင်းနဲ့တောင် အားအမြန်ပြည့်သွားတာပါ။ နောက်မိုက်တဲ့တစ်ချက်က Dash Charge က အားသွင်းအရမ်းမြန်လွန်းလို့ ကိုယ့်ဖုန်းကို တစ်ညလုံးအားသွင်းစရာထိ မလိုပါဘူး။ Dash Charge ရဲ့ အားသွင်းနှုန်းတွေကိုဖြော်ပပေးပါ့မယ်။
– 15 minutes _ 31%
– 30 minutes _ 59%
– 40 minutes _ 75%
– 1 hour _ 91%
– အား 75% ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ အားသွင်းတာစနှေးလာပါတယ်၊ 90% ရောက်ရင်ပိုနှေးလာပါတယ်။
– အားလုံးဝအပြည့်သွင်းဖို့ ၁နာရီ ၄၃ မိနစ်ကြာပါတယ်။
အားလုံးကို ခြုံကြည့်လိုက်ရင် OnePlus 5T က အားသွင်းတာမြန်တာရော ဘက်ထရီသက်တမ်းခံတာရောမှာ အရမ်းကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းအသစ်ဝယ်မယ်ဆိုရင် ထည့်စဉ်းစားရတော့မယ့် ASUS Zenfone4စမတ်ဖုန်းသစ် (FULL REVIEW)
FEATURES, gadgets, Smartwatches
၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး Fitness Tracker များ
Ko Thuya - Dec 12, 2017
Fitness Tracker ခေါ် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို တိုင်းတာပေးတဲ့ လက်ပတ်များဟာ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့က သင့်ရဲ့ လမ်းလျှောက်တဲ့ ခြေလှမ်းများ ၊ ပြေးတဲ့ အကွာအဝေး ၊ နှလုံးခုန်နှုန်းများ၊ အိပ်စက်မှု အခြေအနေများကို တိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာ…
Audio & Video, NEWS, Softwares & Application
62 shares9 views
YouTube မှာ တစ်နှစ်အတွင်း ဒေါ်လာ ၁၁ သန်း ရှာနိုင်တဲ့ အသက် ၆ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်
Forbes က မကြာခင်က ၀င်ငွေ အကောင်းဆုံး YouTubers စာရင်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လကနေ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်းမှာ ဒေါ်လာ ၁၂၇ သန်းကို ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးက ဦးဆောင်နေတာက တစ်နှစ်အတွင်း…
73 shares9 views
App Store မှာ ဂိမ်းတွေ app တွေကို pre-order တင်လို့ရနိုင်ပြီ
Nwe Oo - Dec 12, 2017
Apple platform ပေါ်မှာအခြေခံပြီးဖန်တီးထားသမျှ app တွေအကုန်လုံးကို pre-order လက်ခံနိုင်ဖို့ Apple က developer တွေကို ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ MacStories က သိရသလောက်ဆိုရင် ဒီစည်းမျဉ်းက စတင်အကြုံးဝင်နေပြီဖြစ်ပြီး App Store မှာ တစ်ချို့ app တွေဆို…
182 shares24 views
in-display fingerprint scanner က Samsung Galaxy S9/S9+ တို့အတွက်ဖြစ်လာနိုင်
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနှုန်းမြန်လာမယ့် Google Chrome နောက်ဆုံးဗားရှင်း
Knowledge, Mobiles & Tablets
580 shares95 views
iPhone တွေမှာသုံးတာကြာလာတဲ့အခါ နှေးသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းက????
အရက်မူးပြီး Drone မောင်းနှင်သူများကို အရေးယူမယ့် နယူးဂျာစီ
Android Apple APPS asus Automobiles CAMERAS Facebook features GADGETS galaxy note series games GAMING Google Huawei ios iPhone iPhone/ iPad iPhone 8 iPhone X issue knowledge LG local Microsoft mobile mobile devices Mobile Games MOBILES mpt news Ooredoo PC/LAPTOPS samsung SCIENCE smart devices smartphones SOCIAL MEDIA Sony TABLETS technology telenor Vivo Vivo V7 Websites xiaomi